Wasiirka Maaliyadda Oo Shaaciyay In Ay Xoojinayaan Ururinta Cashuuraha Beriga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Maaliyadda Oo Shaaciyay In Ay Xoojinayaan Ururinta Cashuuraha Beriga
Published on September 9, 2018 by sdwo · No Comments
Berbera (SDWO): Wasiirka wasaaradda Maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi, shaaca ka qaaday in ay qorshaynayaan sanadaha soo socda in dakhliga dalka inta ugu badan laga soo saarro cashuuraha beriga.
Waxaanu sheegay in si kor loogu qaado kobcinta cashuuraha beriga ay goboladda dalkoo dhan ka hirgelinayaan xafiisyadda wasaaradda maaliyadda gaar ahaana cashuuraha beriga, isla markaana ay u dirayaan shaqaale u tababaran hawshaasi.
Yuusuf Maxamed Cabdi, oo safar shaqo ku jooga magaaladda Berbera ayaa maanta waxa uu kormeer ku soo maray xafiisyadda cashuuraha beriga ee Berbera. Isagoo xusay in Berbera uu uga sii gudbi doono degmadda Sheekh ee gobolka Saaxil.
Wasiirka oo ka hadlayay xoojinta cashuuraha beriga iyo siday doonayaan in kor loogu qaado waxa uu yidhi “Waxaynu doonaynaa dakhliga dawladda iyo qaranku inuu ku tiirsanaado cashuuraha bariga. Waxaanu rabnaa sanadaha soo socda in 70% (boqolkiiba todobaatan) cashuuraha bariga loo guuro.
Waad og tihiin oo badeecadaha socdaa heshiisyo dublamaasiyadeed ayay ku xidhan yihiin, laakiin dakhliga dal jira uu ka soo baxaa waa cashuuraha bariga. Cashuuraha bariga ayaanu xoojinaynaa”.
Waxaanu intaas ku daray “Degmadda Sheekh ayaanu tageynaa, meel kastoo aanu u aragno in dakhli ka soo baxayo xafiisyo waaweyn ayaanu ka furaynaa, shaqaale aqoon iyo xirfad ba leh oo tababaran ayaanu geynaynaa.
Waxaanu soo bandhigi doona dhawaan wixii dakhli ah ee naga baxay iyo halka uu ku baxay, bulshadda ayaanu la wadaagaynaa”ayuu yidhi wasiirka maaliyadda Somaliland.
Geesta kale Yuusuf Maxamed Cabdi, waxa uu ka hadlay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2018-ka iyo rejadda ay ka qabaan in sidii la rabay ay u soo baxdo.
Isagoona ka codsaday wasaaradaha dawladda ee wada shaqayntu ka dhaxayso in ay si hufan ugala qayb qaataan soo xeraynta dakhliga.
Waxaanu yidhi “Odoroska miisaaniyadda ee sanadka 2018-ka si fiican ayaanu ugaadhaynaa kalsooni ayaanan ku qabaa, haddii Illaahay SWT yidhaahdo.
Bah wadaagta wasaaraddaha iyo goobaha kale ee dakhli soo saarka in iyagu na si wanaagsan ay noola shaqeeyaan, dhismayaasha wasaaraddu ku leedahay goboladda iyaga na dib u habayn iyo dayactir ayaanu ku samayn doonaa.
Shaqaale dadka ka dhaadhicin kara cashuurta lagu leeyahay oo banaanyaala ayaa dalka wax u qaban kara”.
By: Khadar Cabdi Muuse